Ny orinasa mpamokatra fantsom-panafody sy mpamatsy - Factory Shina - Cixi Wenap International Trading Co., Ltd
Home > Products > Hydraulic Accessories > Fitrandrahana hosina > Fitetezana ny fantsom-basy
Product Introduction of the Fit Fitifitra Fitifirana
Product Parameter momba ny fanamoriana sambo
1 / 4-2 inch
JIC, SAE, DIN, BSP, JIS ary ISO.
White / mavo
-40Â ° C ~~ + 120Â ° C
Vehivavy / lehilahy
Varavarana, Steel karbon, vy tsy misy tanany
100 --- 1000 isa izay miankina amin'ny famokarana famokarana;
Oil / Gas / Water Industrial
T / T 30% ny fandoavam-bola, fandoavam-bola aloa alohan'ny entana. na L / C.
OEM mandidy 45 andro ny famokarana anisan'izany lasitra vaovao, Ny vokatra misy dia mila 30 -35 andro aorian'ny fanamafisana ny baiko
Fepetra momba ny vokatra sy fampiharana ny fametrahana fitifirana fitifirana
1. Miorina amin'ny 45 # carbon steel.
2. Volo matevina na fotsy.
3. Fahaizana: feno.
4. Mitandrema fa ny vokatra rehetra dia 100% inspectioin alohan'ny entana.
5. Fandefasana mora foana.
6. Fanofanana mpanjifa.
7. Sifotra tsara, fahamoram-po, tsy misy bobaka sy fotsy.
8. Ireo karazana samihafa dia mihatra amin'ny hosoka isan-karazany.
9. Ny karoka maimaimpoana dia afaka mahazo fankatoavana.
fampiharana:Oil / Gas / Water Industrial
Tombom-pamantarana momba ny fanangonana sambo
Packaging Details:Nylon plastique + carton corrigés + Multiple plywood case
Hot Tags: Fitaovam-pandriana, Shina, Manufacturer, Supplier, Factory, Made In China, Wholesale, Buy, Customized, An-tety, Miantsoa, ​​Vidiny, Tsaratsara, Teny fohy, High Quality
Carbon Steel Zinc Plated Fixtures Hydraulic Trousers